2018 ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး Horror ဇာတ်ကား (၁၀) ကား - Lifestyle Myanmar
Home Entertainment 2018 ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး Horror ဇာတ်ကား (၁၀) ကား
2018 ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး Horror ဇာတ်ကား (၁၀) ကား
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို မကြည့်ရဲသူတွေသာ ရှိချင်ရှိမယ်၊ မကြိုက်သူတွေတော့ မရှိလောက်ဖူး ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကြောက်ရွံ့ခြင်းဟာလည်း ရသတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး လူအတော်များများ ခုံမင်နှစ်သက်ရတဲ့ အရသာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုသွေးထွက်သံယိုနဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဟောလိဝုဒ်ပရိသတ်တွေအတွက် ကြည့်သင့်တဲ့ ၂၀၁၈ ထွက်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး ဇာတ်ကား (၁၀) ကားကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေး လေးယောက်ဟာ ရိုးရာအခမ်းအနားတစ်ခုမှာ အရမ်းကိုဆိုးရွားထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ Slender man မရှိကြောင်း သက်သေပြဖို့ကြိုးစားကြပေမယ့် မမျှော်လင့်ပဲ slender man ပေါ်ထွက်လာတဲ့ အချိန်မှာတော့ သဲထိတ်ရင်ဖိုအဖြစ်အပျက်တွေကို တွေ့ကြုံရပါပြီ။
2. True Or Dare
အမှန်ပြောမလား ဖျော်ဖြေမလား- ပါတီတစ်ခုမှာ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေ ကျိန်စာတစ်ခုနဲ့ ဆော့ကစားကြရင်း သဲထိတ်ရင်ဖိုကြောက်စရာဖြစ်ရပ်တွေကို ကြုံလာတဲ့အခါ၊ အမှန်ပြောမလား ဖျော်ဖြေမလား သေခြင်းတရားကတော့ ဆိုက်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်
နာမည်ကျော် The Stranger ဇာတ်ကားထွက်ပြီး ၁၀ နှစ်ခန့်အကြာမှာတော့ နောက်ထပ် THE STRANGERS: PREY AT NIGHT ဇာတ်ကားထပ်မံပေါ်ထွက်လာပါပြီ။ ဘယ်လိုတွေကြောက်ဖို့ ကောင်းတယ်ဆိုတာတော့ မပြောတော့ပါဘူး။ horror ပရိသတ်တွေကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ THE FIRST PURGE
တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ ဥပဒေမဲ့ လူသတ်ပွဲမှာ ဘယ်လိုတွေရက်ရက်စက်စက် သတ်ကြလဲဆိုတာ အရင် purge ဇာတ်ကားတွေလိုပဲ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းနေမှာပါ။
၅။ THE MEG
မင်းသားကြီး Jason Statham ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး မင်းသမီးကလည်း အရမ်းကိုချောပါတယ်။ megalodon လို့ခေါ်တဲ့ ဧရာမငမန်းကြီးကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲဆိုတာ အကောင်းဆုံးအက်ရှင်တွေနဲ့ ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၆။ The Nun
Conjuring ရဲအကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားတွေအကြောင်း လူတိုင်းသိပြီးသားပါ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ဘယ်လိုတွေကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာ ပြောပြစရာမလိုအောင် လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားပြီး ကြည့်သင့်တဲ့ horror ကားကောင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောပါရစေ။
အရင်ထွက်ခဲ့တဲ့ Predator ကားတိုင်းအောင်မြင်မှုတွေ ရရှခဲ့သလိုပဲ ဒီနှစ်ထွက်ခဲ့တဲ့ ဂြိုလ်သားကားမှာလည်း ဘယ်လိုသံထိတ်ရင်ဖို ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေနဲ့ စွန့်စားမလဲဆိုတာ horror ပရိသတ်တွေ ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်
၈။ A QUIET PLACE
အသံထွက်တာနဲ့ ဘယ်ကရောက်လာမှန်းမသိတဲ့ အကောင်းကြီးတွေ၊ လူတိုင်းတိတ်ဆိတ်စွာနေထိုင်နေရစဉ် ကလေးရဲ့ဓါတ်ခဲကားလေး အသံမြည်သွားတဲ့အခါ ဘယ်လိုအဖြစ်အပျက်တွေ ကြုံတွေရမယ်ဆိုတာကို သဲထိတ်ရင်ဖိုခံစားရမှာပါ.
ဒီနှစ်ထွက်ဖြစ်လာ မသိလိုက်ပေမယ့် ကျွန်တော်အကြည့်ချင်ဆုံး ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ
သူမရဲ့ ဆိုးရွားတဲ့မိခင်ဖြစ်သူ သေဆုံးပြီးနောက် အိမ်ပတ်လည်မှာ လှုပ်ရှားမှုတွေကို စတင်သတိထားမိရာကနေ ဘယ်လိုတုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ အဖြစ်ဆိုးတွေကို ကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုတာကို သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ရိုက်ကူးပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကွောကျစရာကောငျးတဲ့ ဇာတျကားတှကေို မကွညျ့ရဲသူတှသော ရှိခငျြရှိမယျ၊ မကွိုကျသူတှတေော့ မရှိလောကျဖူး ထငျပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ကွောကျရှံ့ခွငျးဟာလညျး ရသတဈမြိုးဖွဈပွီး လူအတျောမြားမြား ခုံမငျနှဈသကျရတဲ့ အရသာတဈခုလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုသှေးထှကျသံယိုနဲ့ ကွောကျစရာကောငျးတဲ့ ဟောလိဝုဒျပရိသတျတှအေတှကျ ကွညျ့သငျ့တဲ့ ၂၀၁၈ ထှကျကွောကျစရာအကောငျးဆုံး ဇာတျကား (၁၀) ကားကို စုစညျးဖျောပွလိုကျပါတယျ။
ဆယျကြျောသကျ မိနျးကလေး လေးယောကျဟာ ရိုးရာအခမျးအနားတဈခုမှာ အရမျးကိုဆိုးရှားထိတျလနျ့စရာကောငျးတဲ့ Slender man မရှိကွောငျး သကျသပွေဖို့ကွိုးစားကွပမေယျ့ မမြှျောလငျ့ပဲ slender man ပျေါထှကျလာတဲ့ အခြိနျမှာတော့ သဲထိတျရငျဖိုအဖွဈအပကျြတှကေို တှကွေုံ့ရပါပွီ။
အမှနျပွောမလား ဖြျောဖွမေလား- ပါတီတဈခုမှာ ဆယျကြျောသကျလူငယျတှေ ကြိနျစာတဈခုနဲ့ ဆော့ကစားကွရငျး သဲထိတျရငျဖိုကွောကျစရာဖွဈရပျတှကေို ကွုံလာတဲ့အခါ၊ အမှနျပွောမလား ဖြျောဖွမေလား သခွေငျးတရားကတော့ ဆိုကျရောကျလာပါလိမျ့မယျ
နာမညျကြျော The Stranger ဇာတျကားထှကျပွီး ၁၀ နှဈခနျ့အကွာမှာတော့ နောကျထပျ THE STRANGERS: PREY AT NIGHT ဇာတျကားထပျမံပျေါထှကျလာပါပွီ။ ဘယျလိုတှကွေောကျဖို့ ကောငျးတယျဆိုတာတော့ မပွောတော့ပါဘူး။ horror ပရိသတျတှကွေညျ့သငျ့တဲ့ ဇာတျကားကောငျးတဈကား ဖွဈပါတယျ။
တဈနိုငျငံလုံးရဲ့ ဥပဒမေဲ့ လူသတျပှဲမှာ ဘယျလိုတှရေကျရကျစကျစကျ သတျကွလဲဆိုတာ အရငျ purge ဇာတျကားတှလေိုပဲ စိတျလှုပျရှားစရာကောငျးနမှောပါ။
မငျးသားကွီး Jason Statham ပါဝငျသရုပျဆောငျထားပွီး မငျးသမီးကလညျး အရမျးကိုခြောပါတယျ။ megalodon လို့ချေါတဲ့ ဧရာမငမနျးကွီးကို ဘယျလိုရငျဆိုငျကွမလဲဆိုတာ အကောငျးဆုံးအကျရှငျတှနေဲ့ ခံစားရမှာ ဖွဈပါတယျ။
Conjuring ရဲအကောငျးဆုံး ဇာတျကားတှအေကွောငျး လူတိုငျးသိပွီးသားပါ။ ဒီတဈခါမှာတော့ ဘယျလိုတှကွေောကျဖို့ကောငျးတယျဆိုတာ ပွောပွစရာမလိုအောငျ လူတိုငျးစိတျဝငျစားပွီး ကွညျ့သငျ့တဲ့ horror ကားကောငျးဖွဈကွောငျး ပွောပါရစေ။
အရငျထှကျခဲ့တဲ့ Predator ကားတိုငျးအောငျမွငျမှုတှေ ရရှခဲ့သလိုပဲ ဒီနှဈထှကျခဲ့တဲ့ ဂွိုလျသားကားမှာလညျး ဘယျလိုသံထိတျရငျဖို ဇာတျဝငျခနျးတှနေဲ့ စှနျ့စားမလဲဆိုတာ horror ပရိသတျတှေ ကွညျ့သငျ့တဲ့ ဇာတျကားကောငျးတဈကားဖွဈပါတယျ
အသံထှကျတာနဲ့ ဘယျကရောကျလာမှနျးမသိတဲ့ အကောငျးကွီးတှေ၊ လူတိုငျးတိတျဆိတျစှာနထေိုငျနရေစဉျ ကလေးရဲ့ဓါတျခဲကားလေး အသံမွညျသှားတဲ့အခါ ဘယျလိုအဖွဈအပကျြတှေ ကွုံတှရေမယျဆိုတာကို သဲထိတျရငျဖိုခံစားရမှာပါ.
ဒီနှဈထှကျဖွဈလာ မသိလိုကျပမေယျ့ ကြှနျတျောအကွညျ့ခငျြဆုံး ဇာတျကားတဈကားပါ
သူမရဲ့ ဆိုးရှားတဲ့မိခငျဖွဈသူ သဆေုံးပွီးနောကျ အိမျပတျလညျမှာ လှုပျရှားမှုတှကေို စတငျသတိထားမိရာကနေ ဘယျလိုတုနျလှုပျဖှယျရာ အဖွဈဆိုးတှကေို ကွုံတှရေ့မယျဆိုတာကို သဘာဝလှနျဖွဈရပျတှနေဲ့ ရိုကျကူးပွထားတာ ဖွဈပါတယျ။
Previous articleကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲအထိုင်များတဲ့သူတွေအတွက် ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေကို ထိန်းသိမ်းပေးမဲ့ အစားအစာ
Next articleငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာ သတိထားသင့်တဲ့ အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်း ၁၀ချက်